येशूको बाह्र चेलाहरूको विचार गर्दा, धेरैजसोलाई पत्रुसकै सबैभन्दा पहिला याद आउने गर्छ। मत्ती १०:१-४ मा बाह्र चेला वा प्रेरितका नामहरू उल्लेख छन्। सूचीमा कसको नाम पहिला छ? ____________। कुनै कुरा भन्न आवश्यक पर्दा (वा आवश्यक नपर्दा समेत) कुन चेला बोल्न पहिला हुन्थे (हेर्नुहोस्, यूहन्न ६:६७-६८; मत्ती १६:१५-१६; मर्कूस ९:४-६)? ____________। कुनै काममा हामफाल्न कुन चेला पहिला हुन्थे (हेर्नुहोस्, यूहन्ना २१:७; मत्ती १४:२८-२९)? _____________
पत्रुस सधैं काम-कुरामा हामफाल्न तयार थिए । तर हेरेर मात्र हामफाल्नु बुद्धिमानी हो! पौडी खेल्ने पोखरीमा हामफाल्नु अघि, पहिला त्यहाँ पानी छ कि छैन भनी हेर्नु राम्रो हुन्छ! साथै पत्रुस बोल्नमा छिटो थिए। कहिलेकाहिँ उनले ठीक कुरा बोल्थे (मत्ती १६:१६), कहिलेकाहिँ बेठीक (मत्ती १६:२१-२२)। कतिपटक पत्रुस पहिला बोल्थे अनि पछि बिचार गर्थे। बोल्नलाई र गर्नलाई छिटो, आवेगी मान्छे पत्रुस थिए। बाइबलमा अन्य चेलाहरूको भन्दा पत्रुसको बारेमा बढी बताइएको छ। उनका कमी-कमजोरीहरू भए तापनि, पत्रुस आफ्नो मालिकलाई साँच्ची नै प्रेम गर्ने व्यक्ति थिए। परमेश्वरले पत्रुसलाई विशेष प्रकारले प्रयोग गर्नुभयो। पत्रुसको जीवनका निम्न सातओटा घटनालाई छोटकरीमा हेरौं।
१. माछैमाछा - एक आश्चर्यकर्म (लूका ५:१-११)
पत्रुसको अर्को नाउँ के थियो (लूका ५:३)? ______________। पत्रुसको पेशा के थियो (लूका ५:२)? ___________________। लूका ५:४ मा येशूले पत्रुसलाई माछा मार्न सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ एकजना सिकर्मीले एउटा अनुभवी मछुवालाई माछा मार्न सिकाइरहनुभएको देख्छौं! के पत्रुसले प्रभुको आज्ञा माने (लूका ५:५)? ___________। अघिल्लो रात पत्रुस र अन्य मछुवाहरू आफ्ना काममा कत्तिको सफल भएका थिए (लूका ५:५)? _________________। येशूको निर्देशन बमोजिम गरेपछि तिनीहरू कत्तिको सफल भए (लूका ५:६-७)?______________________
लूका ५:८ मा उल्लेखित पत्रुसको भनाइको कारण के थियो होला? उनले आफूलाई किन त्यस्तो पापी मानिस भनी ठाने? के उनले हालै कसैको हत्या गरेका थिए? के उनले आफ्नो भाइ अन्द्रियासलाई तलाउमा डुबाउन खोजेका थिए? यशैया ६:५ मा यशैयाले किन "मलाई धिक्कार छ" भनी भने?
के तपाईंले पनि पवित्र परमेश्वरको सामु आफ्नो पापमय अवस्थालाई महसुस गर्नुभएको छ? के तपाईंले पुकारा गर्दै कहिल्यै यसरी भन्नुभएको छ, "प्रभु, म ज्यादै पापी छु। तपाईं कति महान् र पवित्र हुनुहुन्छ तर म कति पापी छु।"
येशूले पत्रुसलाई उनी बेग्लै खालको मछुवा हुनेछन् भनी भन्नुभयो: "अबदेखि उसो तिमीले _____________लाई ____________" (लूका ५:१०)। पत्रुस मानिसहरूका उत्कृष्ट मछुवा बनेका कुरा यस पाठमा अलि पछि सिक्नेछौं!
२. पानीमाथी पत्रुस (मत्ती १४:२४-३३)
चौथो पहर (मत्ती १४:२५) भन्नाले बिहान ३ बजेदेखि ६ बजेसम्मको समय बुझिन्छ। घण्टौंदेखि चेलाहरू समुद्रमा आँधी-बेह्रीका बीच सङ्घर्ष गर्दै थिए। चेलाहरूले येशूलाई देख्‍नेबित्तिकै तिनीहरूले "यो ता _________ हो"” (मत्ती १४:२६) भनी भने। तिनीहरूले साँच्चीकै मान्छेलाई पानीमा हिँडेको कहिल्यै देखेका थिएनन्, त्यसैले तिनीहरूले यो एउटा भूत हुनुपर्दछ भनी ठाने!
बाइबल विश्वास नगर्ने त्यस्ता कतिपय मानिसहरू छन् जसले बाइबलमा उल्लेखित आश्चर्यकर्महरू बास्तविक घटना होइनन् भन्ने गर्छन्। कोही भन्छन्, येशू पानीमाथि साँच्चै हिँड्नुभएको होइन। तिनीहरूको अनुसार उहाँ पानीमुनिको बालुवामाथि हिँड्नुभएको हो! तिनीहरू भन्छन् पत्रुस डुङ्गाबाट निस्केर बालुवामानै टेके तर येशूतिर हिँड्दै जाँदा बालुवाबाट खसे। के साँच्चै त्यस्तै भएको थियो त? ______________
पद २८-२९ पढ्नुहोस्। के पत्रुसले साहस र विश्वासबिना उक्त कदम चाल्न सक्थे होलान्? तपाईं हुनुभएको भए के तपाईंले पनि पत्रुसले जस्तै गर्नुहुनेथ्यो? तपाईं डुङ्गाको सुरक्षालाई छोड्नुहुनेथ्यो? याद गर्नुहोस्, आँधी-बेह्री चल्न छाडेको थिएन (पद ३२ हेर्नुहोस्)। पत्रुस कुनै शान्त तलाउमाथि हिँडिरहेका थिएनन्!
के पत्रुस आफ्नै सुरले पानीमा हिँड्नलाई उत्रेका थिए कि येशूले उनलाई आज्ञा दिएपछि मात्र तिनले त्यसो गरेका थिए (मत्ती १४:२८-२९)? _____________________। कहिलेकाहिँ मानिसहरू समस्यामा पर्छन् किनकि तिनीहरू परमेश्वरले कहिल्यै नअह्राउनुभएको काम गर्न खोज्दछन्।
पत्रुस किन डुब्न थाले (हेर्नुहोस्, मत्ती १४:३०)?____________ _______________________________। यसले प्रत्येक विश्वासीलाई कस्तो पाठ सिकाउँछ? पत्रुससित विश्वास थियो (पद २८-२९) तर पत्रुससित डर पनि थियो। के विश्वास र डर आपसमा राम्ररी मिलेर बस्न सक्छन्? ________________
पत्रुसको शुरुआत राम्रो थियो! उनले विश्वासमा शुरुआत गरे (उनका प्रथम पाइलाहरू), तर उनी विश्वासमा लागिरहेनन्।
ख्रीष्ट बदलिनुभएको थिएन!
उहाँको आज्ञा (पद २९,“"आऊ") बदलिएको थिएन!
तर पत्रुस बदलिए! पत्रुसले येशूलाई हेर्न छाडेर अन्यत्र हेर्न थाले!
के विफल भएका र लडेका विश्वासीलाई उठाउन येशू सधैं तयार र इच्छुक हुनुहुन्छ (पद ३०-३१)? _____________
यस हप्ता तपाईं आफ्ना आँखालाई कतातिर लगाउनुहुनेछ? परिस्थितितिर कि प्रभुतिर? जीवनमा सामना गर्नुपर्ने समस्यारुपी आँधी-बेह्री वास्तविक हुन सक्दछ, तर तिनमा हामीलाई डोर्‍याइनु (अगुवाइ गरिनु) खाँचो छ, जसरी जमीनमा उत्रन सक्नलाई हवाइजहाजलाई डोर्‍याइन्छ (धावन मार्गका बत्तीहरूद्वारा) र गाडीलाई राजमार्गमा डोर्‍याइन्छ (बाटोद्वारा)। हाम्रा आँखा प्रभुतिर लगाइएको हुनुपर्दछ, तर यसको अर्थ हामीले समस्यालाई बेवास्ता गर्नुपर्छ वा भएको समस्या नभएजस्तै ठान्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन। हामीले जीवनका समस्याहरू र आँधी-बेह्रीहरूमा, हाम्रा आँखा प्रभुतिर (उहाँको सामर्थ्य, उहाँको प्रतिज्ञा अनि उहाँको प्रबन्धतिर) लगाएर तिनको सामना साहाससँग गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ:
पानीमाथि हिँड्दै गर्दा आँधी-बेह्री चलिरहेको छ भनी पत्रुस जान्दथे, तर आँधी-बेह्रीमा पनि प्रभुले उनलाई हिँड्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भनी उनले विश्वास गरे। पछिबाट विश्वासको कमीले उनी डुब्न थाले किनकी उनले प्रभुलाई भन्दा आँधी-बेह्रीलाई ठूलो ठाने।
भजनसङ्ग्रह २५:१५ पढ्नुहोस्। आफ्ना आँखालाई पासोतिर (जीवनका समस्यातिर) नलगाउनोस्। होइन, तपाईंका आँखाहरू कतातिर लगाउनुपर्दछ? ________________
३. येशूको गिरफ्तार (यूहन्ना १८:१-१२)
येशूलाई गिरफ्तार गरिँदा उहाँलाई लैजानलाई त्यहाँ यहूदी र रोमीहरूको ठूलो जमात भेला भएको थियो। के त्यहाँ हातहतियार बोकेका मानिसहरू आएका थिए (यूहन्ना १८:३)? __________। येशूलाई गिरफ्तार गर्न आएको उक्त ठूलो जमातको सामु एघारजना चेलाहरूको सानो झुण्ड सङ्ख्यात्मक हिसाबमा नगण्य देखिन्थ्यो।
चेलाहरूसित कतिओटा हातहतियार थिए (लूका २२:३८)? __________। त्यसमध्ये एउटा तरवार कोसित थियो (यूहन्ना १८:१०)? ____________। के पत्रुसले आफ्नो तरवार चलाउन आतुर गरे? __________। पत्रुसको त्यस्तो प्रतिक्रियाको पछाडि के थियो, साहास कि डर? _________। पत्रुसको जोश ठूलो थियो, तर उनको निशानचाहिँ कस्तो थियो? ______________। पत्रुसको लक्ष्य त्यस व्यक्तिको कान काट्नु थियो होला कि सम्भवत: अन्य अङ्ग नै? _________________________। येशूले "कानको समस्या" लाई के गर्नुभयो (लूका २२:५१)? _________ _________________________________
के येशूले पत्रुसलाई तरवारको प्रयोगलाई निरन्तरता दिनू भन्ने आज्ञा गर्नुभयो (यूहन्ना १८:११)? _____________। तपाईंको विचारमा के येशूलाई पत्रुसको मद्दतको साँच्ची नै खाँचो थियो होला? ____________। मत्ती २६:५३ पढौं। उहाँले चाहनुभएको भए येशूले के पत्रुसको भन्दा राम्रो मद्दत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो?_____________। येशूले स्वर्गदूतहरूको कत्रो सेना बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो? एक पल्टनमा जम्मा ६००० सिपाहीहरूसम्म हुन सक्थे। तसर्थ, १२ पल्टनभन्दा बढी भन्नाले ______________ _________________ भन्दा बढी स्वर्गदूतहरू भन्ने बुझिन्छ! यो त स्वर्गदूतहरूको निकै ठूलो सेना हो! विशाल मानव सेनाभन्दा एउटै स्वर्गदूत बढी शक्तिशाली हुन्छ। के येशूले स्वर्गदूतहरूको उक्त सेना पठइयोस् भनी परमेश्वरसित कहिल्यै प्रार्थना गर्नु भयो?______________। किन गर्नुभयो वा गर्नुभएन? किन येशूले ती मानिसहरूलाई आफूलाई पक्रन दिनुभयो? किन उहाँले ती दुष्ट मानिसहरूलाई आफूलाई क्रूसमा टाँग्न दिनुभयो?
ख्रीष्ट क्रूसमा मर्न नजानुभएको भए के तपाईंलाई कुनै फरक पर्नेथ्यो? ख्रीष्ट क्रूसमा नमर्नुभएको भए तपाईंले मुक्ति पाउने कुनै उपाय हुन्थ्यो? येशू क्रूसमा मर्न जानु किन नित्तान्त आवश्यक थियो (हेर्नुहोस्, मत्ती १६:२१-२२)? बास्तवमा येशूलाई स्वर्गदूतहरूको मद्दत पनि चाहिँदैनथ्यो। यूहन्ना १८:५-६ अनुसार येशूले “म उही हुँ” भनी घोषणा गर्नुहुँदा गिरफ्तार गर्न आउने सिङ्गो टोलीलाई के भयो? _____________ ____________________________। भनौं, येशूले तिनीहरूलाई "मरी जा!"”भन्नुभएको भए तिनीहरू सबै मर्नेथिए। तर येशूलाई कुन कुराको बढी फिक्री थियो – आफैलाई बचाउन कि तपाईं र मलाई बचाउन? ______________________________________
४. पत्रुसको तीनदोब्बर इन्कार (यूहन्ना १८:१५-२७)
पत्रुसले ठूलो साहसका साथ माल्खसका कान च्वाट्टै काटिदिए। तर केही बेरमै साहसी पत्रुस डरपोक पत्रुस बने। मर्नुपरे पनि येशूलाई पछ्याउने प्रण गरेका पत्रुस (यूहन्ना १३:१७) आफ्ना प्रभुलाई कतिपटक इन्कार गर्न लाग्दैथिए (यूहन्ना १३:१८)? __________‌
तीनपटक गरिएको पत्रुसको इन्कारको बारेमा यूहन्ना १८:१७,२५,२६-२७ मा पढ्न सक्नुहुन्छ। पत्रुस आफ्ना प्रभुमा गर्व गरे कि उहाँदेखि शर्माए? _______________। पत्रुसले सत्य बोले कि झूट बोले? ______________। पत्रुसले आनन्दपूर्वक प्रभुलाई स्वीकार गरे कि डरपूर्वक उहाँलाई इन्कार गरे? _________________
अन्तिमपटकको इन्कार सबभन्दा नराम्रो थियो। उनलाई प्रश्न गर्ने व्यक्ति माल्खसका नातेदार थिए (यूहन्ना १८:२६)। उनले पत्रुसलाई बगैंचामा देखेका कुरामा उनी निश्चित थिए। यिनै पत्रुसले उनका नातेदारका कान काटिदिएका थिए! तर पत्रुसले यी सब कुरालाई इन्कार गरे।
पत्रुसले आफ्ना प्रभुलाई किन इन्कार गरे होलान्? किन पत्रुसले ख्रीष्टसित आफ्नो कुनै सम्बन्ध नै नभएजस्तै देखाउन चाहे? के तपाईं ख्रीष्टको जन हुनुहुन्छ? के उहाँले तपाईंको आत्मा बचाउनुभएको छ? के तपाईं आफ्नो प्रभुमा र उहाँले तपाईंको निम्ति गरिदिनुभएको कुरामा गर्व गर्नुहुन्छ? के तपाईं अरूहरूलाई उहाँको बारेमा बताउन मन पराउनुहुन्छ?
५. मानिसहरूका मछुवा (प्रेरित अध्याय २)
के तपाईं कहिल्यै माछा मार्न जानुभएको छ? जानुभएको भए तपाईंले कतिओटा सम्म माछा पक्रनुभएको छ? मानौं तपाईं माछा मार्न जाँदा ३००० ओटा माछा पक्रनुभएको थियो। के तपाईं माछा मार्न सफल भएको मान्न सकिन्छ? _________________
एक दिन पत्रुसले जाल हान्दा ३००० लाई पक्रे। लूका ५:१० मा येशूले पत्रुसलाई उनले _________________ पक्रनेछन् भनी भन्नुभयो। प्रेरित अध्याय २ मा पत्रुसले यहूदीहरूको एक ठूलो जमातलाई प्रचार गरेको पाउँछौं। यहाँ पत्रुस ख्रीष्टदेखि लजाइरहेका छैनन्। उनले साहससाथ ती व्यक्तिहरूलाई प्रचार गरे, आफ्नो उदेकका प्रभु र मुक्तिदाताको विषयमा बताए (प्रेरित २:१४ देखिका पदहरू पढ्नुहोस्)। के उक्त सन्देश उनीहरूको हृदयमा छिर्न सक्यो (प्रेरित २:३७) _____________। योभन्दा अगाडि पत्रुसले आफ्नो फलामे तरवारले मान्छेको कान च्वाट्टै काटिदिएका थिए। अब पत्रुसले दुईधारे तरवारभन्दा पनि लाग्ने परमेश्वरको वचन (हिब्रु ४:१२) लाई प्रयोग गरी मानिसहरूका हृदयलाई छेड्न सके। पत्रुसका श्रोताहरूको “मुटु छेंडियो” अनि तिनीहरू कराए, "हामी के ___________?"” (प्रेरित २:३७)। तिनीहरूले के गर्नुपर्छ भनी पत्रुसले प्रेरित २:३८-४० मा बताइदिए। ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूले उनीहरूलाई पत्रुसले भनेजस्तै गरे (प्रेरित २:४१)। त्यस दिन लगभग कतिजनाले मुक्ति पाए (प्रेरित २:४१)? _______________। त्यस दिन परमेश्वरले पत्रुसलाई ३००० मानिसहरू पक्रनलाई प्रयोग गर्नुभयो! उनी अब "मानिसहरूका ________________ बने" (मत्ती ४:१९)। वास्तवमा यो त शुरु मात्र थियो। पत्रुसले सुसमाचार प्रचार गर्ने काम सिध्याएका थिएनन्, उनले त शुरु मात्र गरेका थिए! उनी अझ धेरै पटक प्रचार गर्नेवाला थिए अनि अझ धेरै मानिसहरू पक्राउ पर्नेवाला थिए (प्रेरित ३:१२ देखिका पदहरूमा पत्रुसको अर्को प्रचार पढ्छौं)।
के तपाईं पक्राउ पर्नुभयो? के जीवित परमेश्वरले तपाईंलाई पक्रनुभयो? के तपाईंले ख्रीष्ट सम्बन्धी खुशीको खबरलाई विश्वास गर्नुभयो? यदि गर्नुभयो भने, के तपाईं अरुहरूलाई वचन फैलाउँदैहुनुहुन्छ ताकि उनीहरू पनि पक्राउ पर्न सकून्?
६. पत्रुस कैदमा (प्रेरित अध्याय १२)
प्रेरित अध्याय १२ मा राजा हेरोदले ख्रीष्टियानहरूलाई सतावट दिएका र उनीहरूलाई दुर्व्यवहार गरेका बारेमा पढ्छौं (पद १)। उक्त राजाले याकूबलाई के गरे (प्रेरित १२:२)? ___________। उनले पत्रुसलाई के गरे (प्रेरित १२:३-४)? _______________ __________________। मण्डली (विश्वासीहरू) ले पत्रुसको निम्ति के गरे (प्रेरित १२:५)? ___________________। के परमेश्वरले यी विश्वासीहरूको प्रार्थनाको जवाफ दिनुभयो? ______________
पत्रुस आए अनि ढोकामा ढकढक्याउन थाले। त्यस घरमा थुप्रै विश्वासीहरू परमेश्वरसित पत्रुस झ्यालखानाबाट छुटाइयोस् भनी प्रार्थना गर्दैथिए (प्रेरित १२:१२-१३)। के रोदाले पत्रुसलाई भित्र आउन दिइन् (प्रेरित १२:१४)? ____________। रोदाको घोषणा सुनेर विश्वासीहरूले के भने? के तिनीहरूले यसो भने, "प्रभुको स्तुति होस्! हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ मिल्यो, पत्रुस छुटाइयो।"? ___________ (हेर्नुहोस् पद १५)। के तिनीहरूले रोदालाई विश्वास गरे? ___________। अन्तमा जब तिनीहरूले पत्रुसलाई देखे तब तिनीहरू ________ परे (पद १६)।
यसले हामीलाई प्रार्थनाको विषयमा के सिकाउँछ? परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुँदा के हामी छक्क पर्नु वा चकित पर्नुपर्छ? परमेश्वरले प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुँदा छक्क पर्छौं भने त्यसको कारण के हुनसक्छ? जब हामी प्रार्थना गर्छौं सो हामी विश्वाससाथ गर्नुपर्छ (मर्कूस ११:२४)।
७. पत्रुसको मृत्यु (यूहन्ना अध्याय २१)
येशूले पत्रुसलाई उनको मृत्यु हुनुभन्दा धेरै अघि नै सो बारेमा बताउनुभएको थियो। प्रभुले पत्रुसको मृत्युको पूर्व-बयान यूहन्ना २१:१८-१९ मा गर्नुभयो। पत्रुस आफ्नो जवानीमा मर्नेवाला थिए कि वृद्धावस्थामा (यूहन्ना २१:१८)? _______________।
के प्रभु तपाईं र तपाईंको जीवन र मृत्युको विषयमा ती हुनुभन्दा अघिबाटै सब कुरा जान्नुहुन्छ _____________________ पत्रुस जिज्ञासु थिए अनि उनी यूहन्नालाई चाहिँ के हुनेछ भनी जान्नचाहे (हेर्नुहोस् यूहन्ना २१:२०-२१)। राम्रै मुखले प्रभुले पत्रुसलाई भन्नुभयो, “त्यसमा तिमीलाई केको चासो?” (यूहन्ना २१:२२)! प्रत्येक व्यक्तिको निम्ति परमेश्वरको छुट्टै योजना र उद्देश्य हुन्छ। महत्वपूर्ण कुराचाहिँ अर्को व्यक्तिको जीवनमा प्रभुले के गर्नुहुनेछ भन्ने होइन। महत्वपूर्ण कुरा हो, म ख्रीष्टको _______ ____________ (यूहन्ना २१:२२) अनि उहाँलाई आफ्नो इच्छाअनुसार मेरो जीवन प्रयोग गर्न दिनु (अरूहरू सफल भए पनि, विफल भए पनि)।
पत्रुसले बाइबलका दुई पुस्तकहरू लेखे। ती कुन-कुन हुन्? १) ________________ । २) ________________। दोस्रो पत्रुसचाहिँ पत्रुसले लेखेका अन्तिम पुस्तक थियो। २ पत्रुस १:१४ मा पत्रुसले आफ्नो आउनलागेको मृत्युको बारेमा बताएका छन्। आफ्नो मृत्युको दिन छिट्टै आउँदै गरेको पत्रुसले जाने अनि उनी जान र प्रभुसित हुन तयार थिए।
यद्यपि बाइबलले यो बताउँदैन,परम्परा (हस्तान्तरण हुँदै आएका ऐतिहासिक अभिलेखहरू) ले बताउँछ, पत्रुस उँधोमुन्टो परी क्रुसमा टाँगिए। उक्त घटना रोमी सम्राट नीरोको राज्यकालमा घटेको हो। पत्रुसले आफूलाई आफ्ना प्रभु मर्नुभएजस्तै गरी मर्न अयोग्य ठाने अनि त्यसैले बेग्लै तरिकाले क्रुसमा टाँगिए, अर्थात् उँधोमुन्टो पारिएर।
विश्वासको निम्ति मृत्यु नै अन्त होइन, शुरू मात्र हो! मृत्यु विश्वासी जनलाई अनन्ततामा र उनको मुक्तिदाताको उपस्थितिमा पुर्याउने केवल सँघार (ढोका) हो (फिलिप्पी १:२३)। आफ्नो अस्थायी “डेरा” अर्थात आफ्नो शरीर (२ पत्रुस १:१४) चाँडै नै छाडिनेछ भनी पत्रुस जान्दथे तर उनी यो पनि जान्दथे, “शरीरबाट अलग” हुनु “प्रभुसित रहनु” हो (२ कोरिन्थी ५:८)।
यदि तपाईं आज मर्नुभयो भने तपाईं कहाँ पुग्नुहुनेछ? के तपाईं मर्न तयार हुनुहुन्छ? के तपाईं जिउन तयार हुनुहुन्छ?
पत्रुस र तपाईं
हामीले पत्रुसको चरित्रलाई अध्ययन गर्‍यौं। उनी कस्ता थिए? दृढ इच्छा भएका, जाइलाग्ने, साहसी, हडबडे, हतपत बोलिहाल्ने, कुनै कुरामा हामफालिहाल्ने, निडर, बहादुर, विश्वास गर्ने, कहिले बलिया, कहिले कमजोर आदि। के तपाईं पत्रुसजस्तै हुनुहुन्छ? के पत्रुस तपाईंजस्तै थिए? कसरी? पत्रुसको जीवनलाई विचार गर्दा, के तपाईं आफूलाई पत्रुसमा झल्केको देख्नुहुन्छ? कसरी? आज आफ्नो जीवनलाई विचार गर्दा, के पत्रुसलाई तपाईंभित्र झल्केको देख्नुहुन्छ? पत्रुसका कुन कुन असल पक्षहरू तपाईंसित छन्? पत्रुसका कुन कुन कमजोर पक्षहरू तपाईंसित छन्? पत्रुसको जीवनबाट तपाईंले के कस्ता पाठहरू सिक्नुभयो?